MANANARA AVARATRA SY SAINTE-MARIE NO HANATANTERAHANA NY IRAKA ARA-PAHASALAMANA FAHA-43
Hanatanteraka iraka ara-pahasalamana faha-43 eto Madagasikara, manomboka amin’ny Alatsinainy 24 Oktobra ka hatramin’ny Zoma 11 Novambra ho avy izao ny Médecin de l’Océan Indien (MOI), izay tarihan’ny Dr Koytcha Firoze.
Fantatra izany nandritra ny tafa nifanaovan’izy ireo tamin’ny mpanao gazety teny Ambohibao androany Talata 18 Oktobra. Hizara roa, araka izany, ity iraka ara-pahasalamana faha-43 ataon’ny MOI eto amintsika ity. Ny tapany voalohany izay hanomboka ny Alatsinainy 24 Oktobra ka hatramin’ny 01 Novambra dia ho tanterahana any Mananara Avaratra. Any amin’ny Nosy Sainte-Marie kosa no hanatanteraha na ny tapany faharoa, izay hanomboka ny 03 Novambra ka hatramin’ny 11 Novambra.
Mpitabo sy manam-pahaizana manokana amin’ny fandidiana sy mpitsabo ny aretina ankapobeny ary mpitsabo nify miisa 38 no hanatanteraka izany fitsaboana izany eto Madagasikara. Mrihina fa ny 2/3-n’ireto mpitsabo ireto dia Malagasy avokoa. Toy ny mahazatra dia hizara roa ny asan’ireto delegasiona ara-pahasalamana ireto. Ny delegasioana voalohany izay ahitana ny Dokotera mpandidy, ny ORL, ny mpitsabo fo, ny mpitsabo maso dia hizaha ireo marary ao amin’ny Hopitalin’ny Mananara Avaratra. Ny delegasiona faharoa izay ahitana ireo mpitsabo ny aretina ankapobeny sy ny aretin’ny zaza ary ny nify kosa dia hiasa eo amin’ny 25 Km manodidina an’I Mananara Avaratra. Marary manodidina ny 7000 no vinavinain’ny MOI ho raisina an-tanana mandritra ny fotoana handalovan’izy ireo eto amintsika. Marihina fa maimaimpoana avokoa ny asa ataon’ny MOI amin’izany, manomboka amin’ny fizahana, ny fitsaboana, ny fandidiana, ny fanafody….
Ankoatra ny fandraisana an-tanana ireo marary dia hanome karazana fampianarana, izay handinihana lohahevitra maro samihafa, ho an’ireo mpitsabo any an-toerana sy avy any Toamasina ihany koa ny ekipan’ny MOI. Hahazo ny anjarany ihany koa ny mpianatra madinika ao amin’ny EPP Manakara amin’ny alalan’ny fampianarana manokana azy ireo hikarakara ny ati-vava sy ny nify.
Mpitsabo mpandidy sy mpitsabo maso kosa no hanatanteraka ny asany any amin’ny Nosy Sainte-Marie ny 03 ka hatramin’ny 11 Novambra. Izany dia araka ny fangahatahana sy ny filan’ny mponina any an-toerana. Ity iraka faha-43 ity moa no hanakatona tanteraka ny asan’ny MOI eto Madagasikara amin’ity taona 2011 ity.
Izao fitsaboana maimaimpoana izao no tontosa dia vokatry ny fiaraha-miasa sy ny fanampian’ireo malala-tanana. Anisan’ireny ny Cassam Chenaï, ny Département de la Réunion, ny Fondation Ravate ary ny vondrona SMTP.
Ireo mpitsabo avy ao amin’ny MOI eo am-panatanterhna ny asny : (sary : MOI)